U samee sawir-qaade macquul ah Photoshop mashaariicdaada garaafka ah | Abuurista khadka tooska ah
Un sawir macquul ah oo leh Photoshop Waa wax muddo dheer lagu soo qabtay barnaamijkan weyn ee noo ogolaanaya inaan la shaqeyno sawirrada sidii inay yihiin sixir. Ama hiwaayad ama shaqo, Photoshop bixiya natiijooyin aad u macquul ah dhammaan noocyada sawir-celinta sawirrada. Baro inaad baratid fikradaha aasaasiga ah qaarkood samee astaamo macquul ah.
Abuur sawirro kuu gaar ah hal-abuur isku darka sawirada noocyadooda kala duwan iyadoo la isticmaalayo a qalab garaaf ah oo xirfad leh oo ay adeegsadeen naqshadeeyayaasha, sawir qaadayaasha iyo farshaxanada garaafyada. Inta badan dadweynaha Maanta waxaa lagu sameeyaa farsamooyinkan natiijooyinkuna waa kuwo la yaab leh. Dhib malahan haddii aad xirfadle tahay ama haddii aad u sameyso si raaxo leh, waxaad baran kartaa inaad sameysid muraayadaha sawirrada oo aad noqoto farshaxan.
para samee sawir-qaade waxa ugu horeeya ee aan ubaahanahay waa inaan helno a fikirka maskaxda si hadhow loo horumariyo foom garaaf ah Waxaa jira tixraacyo aan tiro lahayn oo ku saabsan internetka halkaas oo aan ka heli karno farshaxanno nooc kasta leh oo nagu dhiirrigeliya, mid ka mid ah kuwa aad ugu fiican sawirrada Joel robinson, farshaxanisteani wuxuu leeyahay shaqo ku saleysan fotomontages halkaas oo uu isugu daro fotography oo leh dib-u-hagaajin dijitaal ah (si aad ah ayaa lagula taliyay inaad na dhiirrigeliso). Waxaad sidoo kale ku arki kartaa qaar ka mid ah tan bogga.
Marka aan helno fikradda, waxa xiga ee aan sameyn doonno waa ku horumariso garaaf ahaan.
Haddii golaha la samaynayo sawiro waa inaan ogaano qaar ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah si goluhu u yeesho natiijo macquul ah. Haddii ay yihiin sawirro laga soo qaaday internetka, waxa aan sameyno ayaa ah inaan raadino qaar la kulma saldhigyadan.
Ka taxaddar aragti
Sawirro leh buena calidad
Ka taxaddar iftiin
Afartan qodob ayaa lagama maarmaan u ah abuurista sawir-qaadis wanaagsan, mid kasta oo ka mid ah ayaan u sharxi doonnaa si ka faahfaahsan.
Ka taxaddar aragtida Waxay muhiim u tahay sawir gacmeedkayagu inuu yeesho xaqiiqadaCaqli ahaan, dhammaan sawirada mootada waa inay lahaadaan aragti isku mid ah, in kastoo tani ay kuxirantahay mashruuca aan qabanayno. Tusaale ahaan, haddii aan dooneyno inaan sameyno xarago si aan u dhigno hubka qof si toos ah u fiirinaya xagga hore, waxa saxda ah ayaa ah in sawirradeena ay leeyihiin isla aragtida hore.
ka sawiro waa inuu lahaadaa isku tayo sidaa darteed isku dhafka ayaa ah sida ugu macquulsan. Waxay kuxirantahay mashruuca, inaan xiiseyno ama aan daneyno inaan ku helno tayo dheeri ah sawirada, tusaale ahaan asalka cakiran ayaa faa'iido yeelan kara hadii ay tahay waxa aan raadineyno
La iftiin waa lagama maarmaan si loo gaaro taas taabasho macquul ah mashruucayaga garaafka ah. Marka aan sameyneyno sawir qaadista waxaan haynaa fiiri qodobada iftiinka anaga oo iska ilaalinayna qoraxda tooska ah hadii aan banaanka joogno. Haddii sawirradeena internetka ee loo yaqaan 'montage' ay leeyihiin nal zenith (kor ka socda) waa inaan hubinnaa in fadhigayaga nalalka sidoo kale uu leeyahay qaabka zenith.
Sidaa darteed waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno si aan u abuurno sawir wanaagsan waa si fiican u qorshee faahfaahinta oo dhan.
Waxaan bilownay sawir qaadaha Photoshop furitaanka dhammaan sawirada.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan bilowno sawirada dalagga, tan waxaan u isticmaali karnaa mid kasta Qalabka xulashada Photoshop:
loop (magnetic, polygonal, bilaash)
Maskaarta Degdegga ah
Mar alla markii aan jarayno sawirrada, waxa xiga ee aan sameyn doonno waa inaan u gudbinno aaggeenna sawir-qaadista ee aan tegayo isku dar sawirrada oo dhan.
Tallaabada xigta waa hagaaji sifooyinka muuqaalka sawirada: meeleynta sawir kasta, qiyaasta ... iwm Waxaan dhigeynaa sawir kasta halka uu ku socdo iyada oo aan diirada la saarin qaybta muuqaalka, waxaan kaliya hagaajineynaa qaybta jireed ee abuuraysa aasaaska aasaasiga ah. Toobiye xakamaynta + T Waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo cabirka sawirada.
Marka aan sawirada hagaajino, waxa xiga ee ah inaan sameyno waa midabka ciyaarta, tan waxaan u isticmaali doonaa qalabka dheelitirka midabka. Waa inaan ogaano in sawir waliba leeyahay midabka tuurista gaar ah waana taas sababta aan ugu qasbanaan karno inaan u dhigno labada midab si aan u gaarno xaqiiqadaas aan aad u dooneyno.
Waa inaan ogow taas oo ah midabka ugu weyn ee sawirkeenna saldhig u noqon kara mid u dhigma midabka sawirada oo dhan, tan waxaa lagu sameyn karaa iyadoo sawirka guud loo eego. Marka laga hadlayo sawirka tusaalahan, midabka ugu weyn waa casaan.
Markaan saxno midabka, waxyaabaha soo socda ayaa ah iftiinka saxda ah iyo isbarbar dhiga. Si tan loo sameeyo waxaan abuureynaa nuur kale oo lakab isku dheelitiran oo naga caawin doona nalalka ciyaarta inta udhaxeysa sawirada meeriskeena.
Waan isticmaali karnaa lakabyada kale ee hagaajinta si loo helo natiijooyin macquul ah lakabka hagaajinta heerarka, lakabka hagaajinta xulashada, lakabka hagaajinta xoojinta, iwm.
Trick si loo gaaro a tayo sawir leh waa in si wanaagsan loo qorsheeyo shaqada markasta iyo in la shaqeeyo markasta iyadoo la fiirinayo dhamaan dhinacyada aan kor kusoo xusnay. Ka fikir mashruuc, abaabul oo samee. Xaddiddeenna kaliya ayaa ah mala-awaalkeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Abuur sawir-qaadis macquul ah adoo adeegsanaya Photoshop